Andavanandro Mialoha Fety [Sary] | Hevitra MPANOHARIANA
tsy hita Jentl a, miady amin'ny fiainana ny malagasy, on ne vit plus là, on survit !
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 15:30, 2011-12-14 [Valio]
Tena ilaina ny fanaitairana ny vahoaka
Tela ilaina ny manamarika ireny fombantsika tsy mitandrina. Ny kely hanana @kdaomaramita no tanjovina sy konokononina ho tsara sy madio. Na mahantra aza isika, ny sakafo manome aina mila madio.
Nampidirin'i Hanta @ 14:52, 2011-12-15 [Valio]
Miady amin'ny fiainana tokoa ve sa mionona amin'ny fiainana toy izao sisa ?
Ohatra raha samy mandala ny maha-izy azy na antsipirihiny kely aza isika gasy asa mety hiova ny ho avy ?
Ohatra raha samy mividy vokatry ny tany "made in Madagascar" asa hanao ahoana ?
Ohatra samy mihaino ny tsikeran'i Jentilisa asa mety hadio ?
Nampidirin'i Hanta @ 14:57, 2011-12-15 [Valio]
Misy tolokevitra mety hivoaka izay tena henjana ho antsika malagasy fa tsy mahita vahaolana ankoatra izay anefa aho... mbola hivoaka izay fa andraso aloha
Nampidirin'i jentilisa @ 15:45, 2011-12-15 [Valio]
Lalina tokoa ilay "fahazarana miaina ao anaty loto". Ny azon'ny tsirairay atao dia ny samy manadio sy mampangotraka tsara an'izay sakafo rehetra novidiana alohan'ny hampidirana azy any am-bava. Ny misakafo eny an-kalamanjana dia ezahina fadiana satria aretim-pivalanana sy kankana no ho entiny fa tsy aina hahavelona akory.
Nampidirin'i raprôsy @ 06:58, 2011-12-17 [Valio]
Re: vahaolana ho antsika ...
Tena sarotra sy henjana ny maka fepetra, kanefa dia hionona amin'izao fotsiny ve isika malagasy ?
Nampidirin'i Hanta @ 16:44, 2011-12-17 [Valio]